Hot iyo Spicy Ciirey Dumiga Digaaga ama Qaybaha Qodobka
Casho Mental American Digaagga Digaagga Dareemka digaaga
Tani waa mid la isku qurxiyo oo loogu talagalay digaag ama digaag. Dhirta iyo burka dhoobo waxay u sameeyaan inay si fiican u foorneeyaan foornada, iyo qoyaanka kuleylka ah, digsiga badhidha waa mid cajiib ah. Ku dar faleemo cayriin cayriin ah haddii aad jeceshahay super hot.
Daqiiqada buuggan leh, dhoobada dhadhanka ah ee dhadhanka ah waxay u fiican tahay dhinacyada, daboolka, laydhka, ama cuntada maalin kasta. Rinjiga waxay ka dhigeysaa wax yar oo ka sii yar marka loo eego qashinka qoto dheer. Isku day in aad isticmaasho digaagga digaaga ee la jarjaray, ee ku jira maradaas.
3 pounds drumettes digaag, ilaa 20
3 qaado suugo kulul, sida Texas Pete ama Frank
3 qaado oo saliidda cuntada ah
1/4 qaado shaaha basbaaska madow
1/2 qaado shukumaan
3/4 koob oo bur ah oo udubdhexaad ah
6 qaado oo sabdo ah
1/2 koob suugo kulul, sida Texas Pete ama Frank
1/4 qaado shinbiraha dhulka, ama ka badan
Qasaarado yar yar oo ka samaysan sunta Worcestershire
1 qaado oo tufaax cider suuf
Foornada kuleylka ah ilaa 400 F. Warqad ku sii deyn roodhida oo leh foorno iyo buufin leh buufin leh buufin karsan.
Bacaha kaydinta cuntada, ku dar 3 qaado oo maraqa kulul leh saliidda cuntada, cusbada, basbaaska, iyo 1/2 qaado shaah ah. Ku dar daanjoogyada iyo kufadhigaa dharka.
Burka ku rid bac kale oo googooyo baalasha, dhowr jeer waqti, si fiican u daadi. Diyaarso warqadda dubista.
Dubo 30 daqiiqo; ka saar digsiga foornada.
Isticmaal calaamadaha, u rog qayb kasta oo baaluq ah. Ku soo celi digaagga digaaga foornada iyo dubi 30 daqiiqo ka dheer.
Dhanka kale, digsi yar, ku dar subagga, 1/2 koob oo suugo kulul, basbaaska cayenne, Suugaanta Worcestershire, iyo khalka. Karso, kareyso ilaa subagga la dhalaalay iyo Maraqa ayaa bilaabmaa inuu kiciyo. Ka qaad kuleylka oo iska dhig.
Ka saar baalasha foornada oo u wareeji baaquli weyn. Ku shub qandhada kuleylka kulul ee baalasha oo si tartiib ah ugu riix si jilicsan.
U adeegso sida koore ama cuwaaf oo leh joodar buluug buluug ah , dharka xayawaanka, ama dips kale. Beddelka waxaa ka mid ah isticmaalka suugada lafaha leh ee lafaha leh .
Fatuurad la ruxay 5 g
Kolestarool 66 mg
Carbohydrateska 6 g
Fiber diirran 0 g
Tarjumaadda Saliida Baako Dufan ah
Sef iyo Noodle leh Tamaandho
Samaynta Pastrami kaliya 7 Tallaabo
Recipe Recipe Bambo fudud oo leh Tamaandhada
Foorno laga dubay Digaag
Honey Mustard Breast Breasts
Zucchini Blossoms iyo Rice | Kolokythanthoi Yemistoi aniga Ryzi
Cagaarka de Provence Mix qashinka
Baayacmooyinka asaasiga ah ee bangerka leh leh talooyin sare
Raashinka Duufaanta leh ee Dheecaan Tahay
Cunnooyinka Dheerka ah ee la dubay oo la cunay Taariikh, Cunto iyo Raisins
Shukulaatada Panna Cotta
Sidee loo dhajiyaa Kouscous ee Couscoussier ah
Khudrado qasacadaysan oo fudud
Tobanka Fikradaha Cunnada Dhexe ee Bariga Dhexe